A na-etinye ọdịyo na ụda nke Galaxy S20 Plus nyocha site na DxOMark | Gam akporosis
Galaxy S20 Plus dị mma na egwu na ndekọ ụda? [Nyochaa]
El Samsung Galaxy S20 gbakwunyere Ọ bụ otu n'ime ezigbo arụmọrụ kacha elu nke afọ 2020. A na-ahụta ya dịka usoro kachasị dị mma nke ezinụlọ a.
Ngwaọrụ a abụrụla nke ọtụtụ nyocha na nyocha nyocha dịka DxOMark, nke bụ nke na-adịbeghị anya ịrụ a nyocha nke arụmọrụ gị mgbe ị na-edekọ ma na-akpọ ụda, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa mgbe ebipụtara ndị Galaxy S20 Ultra nyocha igwefoto.
1 Galaxy S20 dị mma na egwu na ndekọ ụda?
Galaxy S20 dị mma na egwu na ndekọ ụda?
Nyocha DxOMark na nyocha dị mma nke Galaxy S20 Plus
Iji bụrụ ekwentị flagship, Galaxy S20 Plus anaghị adọrọ mmasị ya na arụmọrụ ya, ma e jiri ya tụnyere ya. Ọ bụ ezie na ọ gbanwere otu isi karịa Galaxy S10 Plus, onye bu ya ụzọ, yana ọ bụ ezie na mkpokọta ọdịyo nke 66 adịghị njọ, ọ dị n'okpuru Google Pixel 4, nke na-egosi 68, yana n'okpuru Xiaomi Mi 10 Pro, nke nwere maka ogo 76, nke kacha mma na ogo DxOMark.
Ngwaọrụ gosipụtara a ezi nguzo nke mids na highs mgbe ndi DxOMark nwalere ya ihe nlere na ihe nlere na ihe nlere di iche iche, ya na nsughari nke uzo. Agbanyeghị, ọ na - emepụtaghị ụda bass ọ bụla na mpịakọta niile na - ege ntị, yana nzaghachi dị elu nke na - adịkarị elu na oke kacha elu wepụrụ ahụmahụ ahụ egwu egwu.
Kama, rụkwara nke ọma na ule ndekọ, nke nwere akara ndekọ zuru ezu nke 69. Karịsịa, mmeputakwa tonal nso dị oke mma, yana olu doro anya ma nwee nghọta dị ukwuu, ka DxOMark na-ekwu. N'aka nke ya, a na-echekwa ihe ndị na-agbanwe agbanwe nke ụda ahụ nke ọma.
Ntuzi dị mma nke igwe okwu na-enyekwa aka n'ịrụ ọrụ ọdịyo mgbe ị na-edekọ vidiyo na mkpuchi ihu. A adịghị ike bụ ekwekọghị spatial onodi nke ụda isi dabere na ngwa na ojiji. Rụ ọrụ olu ndekọ ndekọ dịkwa naanị nkezi.
The Galaxy S20 Plus na-arụ ezigbo ọrụ nke mkpụmkpụ ụda, iru otu akara 60 dị ka S10 Plus. Otú ọ dị, mkpanaka ahụ na-egbochi mobile site na enweghị bass, nke a na-akwụ ụgwọ ya site na etiti na oke dị larịị.
Balancedị ụda olu dị ike karịsịa na oke olu, ma e wezụga na okwu DxOMark na-egwu egwu, ebe enweghị bass na oke nzaghachi dị elu gbochiri ahụmịhe ọdịyo.
Ọnụ ya na-arụ ọrụ dara ogbenye nke ịchekwa ụda dị ike, ma e jiri ya tụnyere ekwentị ndị ọzọ dị elu, yana akara ogo ya nke 54 na mpaghara a. Ihe ngosi bu agha di nma na oke olu. Agbanyeghị, ndọtị bass adịghị mma na-ebute oke izizi nke ọma na obere mmachi na obere na nkịtị. Mgbapu mmiri kacha mma na oke olu.
Ọkọlọtọ nke afọ gara aga na-arụ ọrụ dị elu karịa inye ụda olu dị mma mgbe ị na-egwu egwu, na-arụ ọrụ yiri nke ekwentị ndị ọzọ na otu ndị otu ya. Na-eme ka ọ dịtụ mfe ịchọta ụda isi mmalite, ọ bụ ezie na ọ na-epe mpe karịa mgbe a na-akwụghachi ya na ntanetị.
Iguzozi dị mma ke kwụ nghaziọ bụ ezie na mgbe ha nọ na ndozi eserese, ndị na-ege ntị na-aghọta na isi mmalite ndị a na-abịa site n'elu etiti ngwaọrụ ahụ. Enweghi bass na-egbochi ikike ndị na-ege ntị ịghọta ebe dị anya site na isi mmalite, yana ụda olu ọkachasị karịa ka ha kwesịrị.
Galaxy S20 Plus na-arụpụta ezigbo nsonaazụ mgbe ị na-eweghachi olu ahụ n'ụzọ ziri ezi, ebe ọ bụ na oke olu dị na nke ngwaọrụ dị elu ugbu a, a na-agbanwekwa obere olu nke ọma.
Ihe na-egbukepụ egbukepụ na mmegharị nke ọdịyo na ekwentị a bụ ezigbo ụda dị ọcha, yana obere arịa, mana ya na ụfọdụ mgbagha bass na oke olu.
DxOMark kọwakwaara nke ahụ enwere ụfọdụ ngọngọ na etiti na treble mgbe ị na-egwu egwu na oke olu. Ihe edemede artifact nke 88 bụ naanị otu isi na-erughị nke ụdị Red Magic 3S.
The Galaxy S20 Plus na-arụ ọrụ dị mma nke ịmegharị ụda ụda nke ụda olu, na-adaba na arụmọrụ nke Pixel 4, mana ụda olu ụda olu ya nke 76 bụ isi ihe ise dị n'okpuru S10 Plus. Nke ahụ bụ obere n'ihi ụda dị elu dị elu nke na-ebelata nghọta doro anya ntakịrị.
E wezụga ịbụ a bit anya mgbe Ndekọ video, olu n'ozuzu ya na-ada ụda. E dekọtakwara ihe ntanetị na-achọghị mgbe a na-ejide nzukọ.
Nchịkọta ụda ụda nke ihe ndekọ dị mma, ọbụlagodi na ọkwa dị elu. Otú ọ dị, enweghi oke ihe dị elu ma dị ala ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ dị elu.
Ekwentị dị mma na ichekwa ihe dị egwu nke ụda edere, dị ka ndị ọkachamara na DxOMark si kwuo. Nnukwu nnwere onwe nduzi nke microphones na-enyere ya aka ị nweta obere akara ngosi nke 68, naanị isi abụọ n'okpuru ụdị V30 Pro na-eduga na nke ọma karịa Pixel 4.
Envelopu ụda dị mma, nke a na-emegharị n'ụzọ doro anya. Otú ọ dị, envelopes na-akawanye njọ na nnukwu ndekọ n'ihi enweghị nghọta na mmepụta ọtụtụ ugboro, na-ebelata ihe ndekọ ederede na ọgụ nke ngwa egwu.
S20 Plus na-arụ ezigbo ọrụ iji chekwaa ọnọdụ ohere nke isi iyi dị na ndekọ.
Otu ike ya bụ na mee ka ebe di anya ghara isi, nke na-eme ka mkpxkpx ederede d [mfe n easy ebe. A na-echekwa ebe a na-akpọ ụda n'ime ya nke ọma. O di nwute, ngwa ncheta bu ihe edere na mono, nke na-egbochipu akara edemede.
El flagship na-enweta akara ngosi dị n'etiti mkpọ mpịakọta nke 66, mmelite dị egwu na Galaxy S10 Plus. Ọ bụ ezie na ọkwa ndekọ adịghị elu dị ka ha nwere ike, ha na-agbanwe agbanwe n'ofe ngwa, nke bara uru ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịme ọtụtụ ụdị ndekọ dị iche iche ma achọghị ịgbanwe olu ndekọ ekwentị mgbe ị gbanwere ngwa.
Ndi Samsung Galaxy S20 agaghị ekwe omume mbanye anataghị ikike?
DxOMark na-ekwu na, na otu na mmeputakwa, smartphone na-amị ndekọ ederede dị ọcha, nke na-enye ya otu n'ime akara kachasị elu anyị na ihe ndekọ ederede: ihe 77. Agbanyeghị, ọ nwere ụfọdụ quirks.
Iti mkpu nwere ike iwebata agbagọ na mgbapụta ụda, ọkachasị mgbe ị na-ese vidiyo selfie. N'ebe a na-eme mkpọtụ, a na-ahụkarị mgbagha bass na ebe a na-eme mkpọtụ. Igwe okwu nwekwara ike ịta ahụhụ site na nzuzo, nke na-eme ka ụda olu ghara ịnwe nghọta.
Ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma na ndekọ ndekọ ụda ndabere na idebe ha ka ọ bụrụ ihe okike, ọ bụ ezie na ha enweghị oke bass na nzaghachi treble. Tụkwasị na nke a, enwekwara ọganihu mgbe ị na-agbapụ vidiyo nke onwe, na-ewebata mkpọtụ mkpọtụ na mpaghara mkpọtụ obodo.
N'akụkụ na-enwu gbaa, na-arụ ọrụ dị mma nke na-emesi ụda nke isiokwu ahụ ike mgbe ị na-agbapụ vidiyo selfie, nke na-enyere aka mee ka ihe ndekọ ndị ahụ nwee nghọta site na ime ka ụda na-ada site n'akụkụ na azụ nke ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Galaxy S20 Plus dị mma na egwu na ndekọ ụda? [Nyochaa]
Microsoft Surface Duo nkọwa na-leaked